5 Tips Top Kuba Brisbane By Train | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iingcebiso zokuhamba > 5 Tips Top Kuba Brisbane By Train
Brisbane na imali Queensland kwaye ubusiswa A-Uluhlu ezinika ezifana Sea World, i iiloni omhle gadi South Bank, kunye neBridge Bridge, kunye nezinye ezininzi - Australia elide cantilever ibhulorho.
Kwakhona isixeko creative, nge art olondolozo lwembali zivaliweyo, neegalari ezo yaye cafes Chic ezininzi, plus oko sokufezekisa ephelele esimhlophe Gold Coast, ulwandle, yaye I-surf.
Ukuba buso ukuqeqesha zokuhamba, Iinkqubo kaloliwe kungundoqo emzini izibonelelo zothutho kunye nezenkcubeko imbali.
Ngoko ke ukuba ufuna ukubona Brisbane ngololiwe, apha ezintlanu amacebiso eziphezulu.
Elise kumgca North Coast, Station Central lo mzi network ngayo main station yaye lifumaneka bang entliziyweni kwisithili central business Brisbane kaThixo.
Avulwe emva 1889, kwemi yayo classic zihoyi Anzac Square kwaye kwemithambo esingundoqo iindlela bakhonza eQueensland lonke Australia.
Ukuba Ndingathanda indawo kufutshane, Oaks uCharlotte Towers Hotel i kukhetha kakhulu - its not kubiza prohibitively kunye abandwendweli neziqaqambileyo zimkile ngoyaba nesibhakabhaka isixeko.
Brisbane Metro ayikho kodwa iyasebenza - kodwa inkqubo eziquqa ubunzima ixhaswe ngokupheleleyo, yokwakha iqala ngamandla kulo nyaka kwaye kufuneka kuvuleleka kuluntu ngu 2023.
at 21 ubude, kuya ukukhonza 18 izitishi kwisixeko sonke, yaye abahlali yaye abakhenkethi ngokufanayo kukwazi ukuba akhwele nangaphandle njengoko ethanda.
Kuba enza A $ 944 million, kodwa iinzuzo zibandakanya kunciphise ukuxinana yaye luphenjelelwa kwiibhasi esengozini Brisbane kaThixo.
Namanzi Train Sunday
Ukuba ufuna udubulo ukusuka kwixesha elidlulileyo (ngeendlela ngaphezu kwesinye), intloko ku Brisbane xa Roma Station Street ukuba njalo Umphunga umcimbi Train Sunday.
Inyathelo ngaphakathi neenqwelwana ngamaplanga genteel kwaye ngoko nangoko babuyiselwa kwixesha ebukekayo kakhulu, njengokuba wena chug usapho lwakho kunye ezidlulileyo yaseBrisbane kaThixo kakhulu lihle zindawo.
Yinto fun for yonke iminyaka yobudala, kodwa kids kwaye abadala ngokukhethekileyo uyotywe yi namacici yayo.
I zocweyo Rail Museum
Ipswich imi kumazantsi mpuma engingqi yedolophu yaseBrisbane kwaye kulapho uyakufumana indawo yokusebenzela emangalisayo Museum.
Yeyona ngamava lemveli interactive nonefuthe ahlaliswe zocweyo kaloliwe endala Australia kwaye igcwele kunye zikaloliwe umphunga ezinqabileyo, zemishini enkulu industrial, nemiboniso multi-media.
Xa ufuna uhambo kwezemfundo mnandi owenzelwa umzi wonke wakowabo, ukubheka phambili ngakumbi.
Brisbane moya sixakeke yezothutho exakekileyo nto kokuhlolela cafes ezifana Fonzie Abbot, Iibhari ezinje ngeTransit Tavern, yaye Ababoneleli yokupaka efana Looking4.com.
Kodwa baninzi kubahloli afika moya, into engcono nayo Airtrain, i 13 umzila kaloliwe ngekhilomitha zabakhweli ukuba oko kwenziwe ngokukhawuleza spiriting abahambi ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya ukuya Central Station ukususela 2001.
Emva yindiza olwasishiya, Airtrain uthwala ukuba kumbindi wesixeko nje 20 imizuzu - pretty enhle.
Landela iingcebiso zethu ezintlanu uhamba Brisbane ngololiwe kwaye uya kuhlala endleleni ukuba oncomekayo iholide.
Ingaba unayo tips for yaseBrisbane umdla uloliwe? Yabelana nabo kwicandelo izimvo kwaye ukuba udinga ukuba uloliwe Gcina A uloliwe.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-brisbane-train%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#brisbane #railtips australia Brisbane by train tips uloliwe